संसाधन बनाम संसाधन | Martech Zone
म एक भिडियो भर मा भयो टोनी रोबिन्स at TED त्यो धेरै प्रेरणादायक थियो। उसको एक लाइन वास्तवमा मसंग व्यक्तिगत रुपमा साँचो भयोः
मैले कहिल्यै पाएको सब भन्दा पूरा गर्ने जागिरका लागि एकीकरण परामर्शदाता नै थिए ExactTarget। त्यतिखेर एक्स्ट्याक्टरेटसँग सीमित अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (एपीआई) थियो तर हाम्रो ग्राहक परिष्कार र स्वचालनमा बढ्दै थियो। हरेक दिन एक ग्राहकको साथ मीटिंग थियो जुन एक धेरै जटिल समस्या थियो, र मेरो काम भनेको हाम्रो साधारण एपीआई प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्नु थियो।
मेरो सफलता को समय मा म थियो सधैं अन्तिम लक्ष्य हासिल गर्न एउटा तरिका पत्ता लगाउनुहोस्। यदि एपीआई एक विशिष्ट विधि समर्थन गर्दैन, म यसलाई पार गर्न डाटा र कलहरूको संयोजन प्रयोग गर्दछ। कहिलेकाँही समाधानहरू एकदम सरल थिए (र समाधान गर्न मस्तिष्क विश्वास लिएका थिए)। हामी केहि उत्पादन स्टाफ नटहरू चलाउँदछौं किनभने हाम्रो समाधानले करोडौं बनाउँदछ एपीआई कार्य सम्पन्न गर्न कल गर्दछ।
मेरो निरन्तर सफलताको कुञ्जी यो हो कि म शायद नै 'कुनै' भन्छु, यदि कहिल्यै। कहिलेकाँही तपाईले गन्तव्यमा पुग्नको लागि मार्ग परिमार्जन गर्नु पर्छ। मार्ग एक स्रोत हो। यदि यो अवस्थित छैन भने, तपाईं संसाधन हुन र आफ्नै निर्माण गर्न आवश्यक छ!
भएको छैन स्रोतहरू काम गर्न नहुने एउटा बहाना हो। संसाधन संसाधनहरूको पर्वाह नगरी, केहि गर्नका लागि साधन पत्ता लगाउन क्षमता हो!
यहाँ TED मा पूरा टोनी रबिन्स प्रस्तुत छ। चेतावनी: उसले केहि धेरै रंगीन एक्स्प्लेभिज प्रयोग गर्दछ।
धन्यवाद एन्जेला माइर्स फेला पार्न को लागी!
टैग: क्रिसमसईमेल मार्केटिंग रोईबिक्री सक्षमताको ईतिहासआतिथ्यलट्ठीजाली ईन्जिनहरूबिक्री टेक्नोलोजी
फेसबुक नयाँ AOL हो
जनवरी 2, 2009 मा 4: 05 एएम
यो पोष्ट पढेपछि, र रबिन्स टेप सुनेपछि, मैले मेरा नयाँ बर्षका रिजोलुसनमा हेरी, तिनीहरूलाई फाट्यो र केवल एउटा नयाँ रिजोलुसन लेखें: “बस यो गरौं”। ध्यान दिनुहोस् मैले भनेन: "बस यो गर्नुहोस्"।
जब म बिक्री कार्यकारी हुँ र बिक्री ब्यवस्थापकहरूलाई काममा लिन्छु म तिनीहरूलाई सँधै भन्दछु कि तिनीहरूको काम यसलाई बेच्न बेच्नको लागि हो। भिन्नता सबै उपलब्ध संसाधनहरूको प्रयोग बिक्री बन्द गर्न को लागी गरीरहेको छ र यदि स्रोतहरू उपलब्ध छैन भने ती सिर्जना गर्न वा संसाधन बन्न तपाईंको राज्यको रूपमा।
यो वर्ष सुरू गर्न को लागी एक महान पोष्ट हो।
जनवरी १, २०१3१२::2009 अपराह्न
तपाईको टीमले यस प्रेरणालाई बुझ्ने र जवाफ दिनको लागि उत्तम तरिका के हो?
यसलाई प्रभावकारी रूपमा सिकाउन म के गर्न सक्छु?
यो नेतृत्व, डेरेकबाट सुरु हुन्छ। महान नेताहरू बहाना बाहिर stomp। यो 'होइन' भन्न ठीक छ, तर यो कहिले पनि ठीक हुँदैन 'हामी सक्दैनौं किनकि ...' भन्नका लागि। यदि एक व्यवसायलाई थाहा छ कि यसले केही गरिरहेको हुनुपर्दछ, तिनीहरू कसरी पत्ता लगाउनेमा संसाधन हुनु आवश्यक छ।
जनवरी १, २०१2१२::2009 अपराह्न
यो एक साझा गर्न को लागी धन्यवाद - प्रेरणादायक र उपयोगी।
एसएमबीले भने जस्तै यसलाई पूरा गर्नुहोस्। जीवनमा मैले जितेको सबैभन्दा गाह्रो चीजहरू मध्ये एउटा यो थाँहा पाएको थिएँ कि मैले पहिलो पटक केहि गर्न गाह्रो हुने छैन तर यो सिद्ध हुँदैन तर प्रत्येक प्रयास मैले केही गरिरहेको छु भने यसलाई पूर्णतामा जान्छ।